Iwu 36 nke Social Media | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị gụọ blog a ruo oge ụfọdụ, ị maara na m na-eleda iwu anya. Mgbasa mgbasa ozi ka na-eto eto ka itinye iwu n'oge a ka dị ka akaghi aka. Ndị folks na FastCompany na-achịkọta ọtụtụ ndụmọdụ ndụmọdụ ma na-akpọ ha Iwu nke Social Media.
Ihe omuma ihe omuma a bu nchikota nke iwu edeputara na akwukwo nke September. M ka na-agaghị na-akpọ iwu ndị a dị ka m mebiri ole na ole n'ime ha ma ka na-enwetakwa nsonaazụ highly but I would highly recommend this as a great collection of tips to improve your social marketing efforts.
FastCompany na-achịkọta ndụmọdụ gị ugbu a. Ị nwere ike nyefere ha na ịntanetị.
Tags: ngwa ngwaiwu nke mgbasa ozielekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ media infographicna-elekọta mmadụ media iwumgbasa ozi mgbasa ozi
Nov 30, 2012 na 1:55 AM
Mgbe ụfọdụ ana m eleghara iwu anya mana n'ụzọ m si asọpụrụ ndị na-agbaso iwu ndị a, mana maka soshal midia ana m anabata iwu m na-eme ihe niile m chọrọ n'echeghị echiche gbasara iwu.
Ekwetaghị m nkwakọba ihe ndị a, echeghịkwa m na ụfọdụ bụ gbasara mgbasa ozi.
Anyị na nkwekọrịta @barryjfeldman: disqus!
"… Social media ka bụ nwata ka itinye iwu n'ọrụ n'oge a ka odi ka akaghi aka." Ọ bụghị naanị na ha akaghi aka - isi echiche nke mgbasa ozi mgbasa ozi 'Iwu' bụ ihe a na-achị ọchị! Ditto maka ndị ahụ niile na-eme ihe ngosi na-elekọta mmadụ 'Omume Kachasị Mma' less Ma ọ bụrụ na, m na-anwa ire gị akwụkwọ m kachasị ọhụrụ - n'ọnọdụ ahụ, nọgide na-agụ ha!
Kpọrọ - ọ dịghị onye kachasị mma ụbọchị ma ọ bụ oge iji biputere na Twitter… .ma ọ bụ otu ihe kachasị mma iji mee ka ọrụ mmekọrịta maka ụdị - ịre ahịa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ọtụtụ mgbanwe ọ nwere ike ime ka isi gị na-atụgharị uche na ha! Ọha na eze bụ ihe na-adọrọ mmasị… gbagwojuru anya… na-ekwu okwu banyere ikike ịre ahịa - yana ọnyà dị iche iche maka ahịa ọ bụla na-anwa ime ka ndụ dị mfe na ya!